BARCELONA OO CIYAARTII CAAWA 2-0 KU DUBATAY MANCHESTER CIYAAR TAARIIKHI AH | Toggaherer's Weblog
Kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa Caawa guul ka soo hoysey ciyaartii ay kula yeelatey garoonka magaalada Rome kooxda Manchester United.
Kooxda Barcelona ayaa 2-0 ku garaacay kooxda Manchester United ciyaar si weyn loo sugayey oo xaley ka dhacday garoonka Stadio Olimpico ee magaalada Rome ee xarunta dalka Talyaaniga, waxaana taasi ay Barcelona xaley siisay koobka horyaalka Europe ee Champion League.
Ciyaaryahanada Lionel Messi iyo Samuel Eto’o ayaa u dhaliyey Barcelona labada gool ee ay guusha klu hanatay taaso oo meesha ka saartey rajadii ay Manchester United ka qabtey in ciyaartaasi ay ku soo baxdo.
Laakiin dadka la socda ciyaaraha ayaa sheegaya in Barcelona ay goolasHa u dheereyd ciyaar wanaag ay soo bandhigtey ciyaartii xaley.
Taageerayaasha Barcelona iyo ciyaaryahanada kooxda ayaa buuq iyo farxad ku qeyliyey garoonka gudihiisa, iyagoo kor u qadey koobkay hanteen.
Waxay ciyaarta xaley ahayd mid si weyn loo sugayey, waxaana gudaha garoonka ku daawanayey dad ka badan 70,000. waxaa sidoo kale intaa dheeraa masuuliyiin ka qeybgashey daawashada ciyaartan halka caalamkana ay ka daawanayeen boqollaal million oo qof shaashadaha telefishanada.
Amaanka garoonka iyo goobaha ku dhow ayaa si aad ah loo adkeeyey iyadoo ciidamo boolis ah iyo diyaaradaha helicopter ka ay waardiye ka hayeen garoonka Stadio Olimpico oo ay ka socotey ciyaarta dhexmareysey labada kooxood ee xifaaltanka badan ka dhexeeyo.
Masuuliyiinta xaley garoonka joogtey waxaa ka mid ahaa raisul wasaarayaasha Talyaaniga iyo Spain iyo boqorka Spain oo si aad ah ula socdey ciyaarta xaley.
Waxaa isla xaley dabaaldegyo waaweyn ay ka bilawdeenqeybo ka mid ah adduunka oo dhan iyadoo loo dabaaldegayo guusha Barcelona.
Tabaraha kooxda Barcelona ayaa isagoo faraxsan sheegay inuu rajeynayo in Barcelona ay sii wadi doonto inay soo celceliso guusha noocan oo kale ah.